သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၄-၂) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 8:01 PM | No မှတ်ချက် |
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်နှင့် ပန်ဆိုင်းအကြား ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
အယုဒ္ဓယတွင် မြန်မာအလုပ်သမား ၅၄ ဦးကို ထိုင်းရဲ ဖမ်းဆီး
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲပါဝင်မှု စွပ်စွဲချက် ရုပ်သိမ်းပေးရန် သမ္မတထံ SSPP တောင်းဆို
ကိုကြီးကျော်နက်ပွဲသွားစက်လှေ အမိုးကျိုးကာ တစ်ဦးသေ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
သြစီဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အပြောကို မွတ်စလင်တွေ ဝေဖန်ကြ
ကျောက်မိုင်းခွဲစဉ် ကျောက်စ ယာဉ်ပေါ်ကျရောက် ထိမှန်၍ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေမှု အမေရိကန် စိုးရိမ်
လောက်ကိုင်ယာဉ်တန်းပစ်ခတ်ခံရ အကျဉ်းသူ ၄၀ ကျော်ဒဏ်ရာရ
တခါသုံး ဆေးထိုးအပ် သုံးဖို့ WHO လှုပ်ရှား
ISIS တိုက်ဖျက်ရေးကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပြင်သစ်နိုင်ငံက လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘောတစ်စီးကို စစ်ဆင်ရေးတွင် စတင်အသုံးပြု
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ပြောက်ကျားများကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ISIS အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်
ISIS က ကလေးငယ်များကို စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပေးနေ
ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားတွေ ယာယီ သက်သေခံစာအုပ် လျှောက်နိုင်
ကော်စမွီကျွန်း မြန်မာအမျိုးသမီးအသတ်ခံရမှု သံသယရှိသူ သုံးဦးဖမ်းမိ
ထိုင်းနိုင်ငံကော်ဆမွီကျွန်းတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးတဦး အသတ်ခံရ
ပြည်တွင်းခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး RCSS/SSA ဥက္ကဌ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
တပ်သားသစ်စုဆောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ် ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်
မလေးရှားမှာ လူကုန်ကူးမှု ကုလစုံစမ်းမည်
အကျဉ်းသားတွေပါတဲ့ ကားတန်း ပစ်ခတ်ခံရ
အိုဘားမားနဲ့ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ထိပ်တိုက်တွေ့
လုံးပတ် ငါးလက်မရှိ သစ်ချောင်းကြီး လည်ပင်း ထုတ်ချင်း ပေါက်စူးဝင်ခဲ့ သူအား တောင်ငူ ခရိုင် ဆေးရုံကြီးမှ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့
သုံးစွဲရန်မသင့်သော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်
ဝှိုက် ကတ်တွေ အပ်ဖို့ စစ်တွေမှာ စပြော
(၈၇) ကြိမ်မြောက် အော်စကာ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ
Posted: 24 Feb 2015 04:19 AM PST
ရှမ်းပြည်နယ် မူဆယ်ခရိုင် ၁၀၅ မိုင်နဲ့ ပန်ဆိုင်းအကြားမှာ ဒီမနက် ၁၀ နာရီခွဲလောက်က ပေါက်ကွဲမှု တခုဖြစ်ပွားပြီး ကုန်တင်ကားတစီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အမည်မသိ ပျောက်ကျားဝတ်စုံဝတ် လက်ကိုင်အဖွဲ့က လက်လုပ်မိုင်းနဲ့ပစ်ခဲ့တာလို့ ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးအောင်မြတ်မိုးက ဒီဗွီဘီကိုပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ရတဲ့သတင်းကတော့ သစ်သီးတင်ကားပေါ့နော်။ ဖရဲသီးကား
Posted: 24 Feb 2015 04:17 AM PST
ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဓယခရိုင် ဘန်ပါဟန်မြို့နယ်မှာ ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက တရားမ၀င် မြန်မာအလုပ်သမား ၅၄ ဦး တင်ဆောင်လာတဲ့ ကား ၈ စီးကို ရပ်တန့်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ရဲအရာရှိရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကားပြီး ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ တရားမ၀င်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို အာရှလမ်းမကြီးကနေ ဘန်ကောက်မြို့ကို ပို့ဆောင်မယ်လို့ သတင်းရပြီးနောက် တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီကနေ့ ကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ ပြည်တွင်းလြုံ
Posted: 24 Feb 2015 01:42 AM PST
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄ ရက် ၂၀၁၅ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော တိုက် ပွဲတွင် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိသည်ဆိုသည့် အစိုးရ၏ စွပ်စွဲ ချက်သည် မဟုတ်မှန်သောကြောင့် ရုပ်သိမ်းပေးပါရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ အိတ်ဖွင့်ပေး စာတစောင် ပို့လိုက် သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ နိုင်ငံေ
Posted: 24 Feb 2015 01:38 AM PST
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ချင်းတွင်းမြစ် အရှေဖက်ကမ်း ထန်းတောကြီး ကျေးရွာမှ အနောက်ဖက်ကမ်း ပခန်းငယ်(ကိုကြီးကျော်နန်း) သို့ ပြေးဆွဲနေသည့် ညောင်တိုရွာမှ ဦးမြင့်လွင်၏ စက်လှေတွင် စက်လှေခေါင်မိုးပေါ်သို့ လိုက်ပါစီးနင်းသူ များပြား သောကြောင့် အမိုးပြုတ်ကျကာ စက်လှေအတွင်း လိုက်ပါသူအမျိုးသမီး တစ်ဦးသေဆုံးကာ၊ ကျန်အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ဒဏ်ရာရရှိသူ အမျိုးသမီးသုံးဦးအား ပခန်းကြီးတိုက်နယ်ဆေးရုံ
Posted: 24 Feb 2015 12:45 AM PST
ဝန်ကြီးချုပ် တိုနီအာဘော့တ် (Credit: AAP) မွတ်စလင် ​ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ​အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ​မလုပ်ဖို့ ​ပြည်သူတွေကို ​တိုက်တွန်းရမှာ ​ဖြစ်သလို ​စိတ်လိုက်မာန်ပါ ​တိုက်တွန်းမှုလုပ်ဖို့ ​လိုတယ်လို့ ​သြစတြေးလျ ​ဝန်ကြီးချုပ်က ​ပြောဆိုတဲ့အပေါ် ​မွတ်စလင် ​အသိုင်းအဝိုင်းတွေက ​ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ ​အကြမ်းဖက်မှု ​တိုက်ဖျက်ရေး ​မဟာဗျူဟာအကြောင်း ​ဝန်ကြီးချုပ်က ​မနေ့တုန်းက ​ချပြစဉ်တုန်းက ​မွတ်
Posted: 24 Feb 2015 12:35 AM PST
မန္တလေး ၊ ၂၄-၂၀၂၀၁၅ ထိုင်း- မလေးရှား- စင်ကာပူ- မြန်မာ လေးနိုင်ငံ ခရီးစဉ် ရှေးဟောင်းယာဉ် တစ်စီးအပေါ် လိုက်ပါလာသည့် ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံသူ တစ်ဦးသည် ကျောက်မိုင်း ခွဲစဉ် ကျောက်စ ယာဉ်ပေါ် ကျရောက် ထိမှန်၍ ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက မန္တလေး- အင်းလေး ခရီးစဉ် အတိုင်း ထွက်ခွာလာသည့် ထိုင်း- မလေးရှား- စင်ကာပူ- မြန်မာ လေးနိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှ ယာဉ်အမှတ် 1-OAS/ 576
Posted: 24 Feb 2015 12:34 AM PST
ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက် ကိုးကန့်ဒေသမှာ ပဋိပက္ခပိုပြီး ကြီးလာနေတာကို အထူးစိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရက တနင်္လာနေ့မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး အတွက် မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်တို့ကြား စေ့စပ်ဆွေးနွေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီတွေကို အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ ခွင့်ပြုဖို့ အစိုးရ အာဏာပို
လောက်ကိုင်မြို့ စီအောအကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသားတွေ၊ တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူတွေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ တင်လာတဲ့ ယာဉ်တန်းတိုက်ခုိုက်ခံရပြီး အကျဉ်းသူ ၄၄ ယောက်၊ အကျဉ်းဝန်ထမ်း ၁ ယောက်နဲ့ စစ်သား ၁ ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လုို့ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က လားရှိုးမြို့သို့ ပို့ဆောင်ရန် ထွက်ခွာလာတဲ့ အဆိုပါယာဉ်တန်းဟာ ပါစင်ကျော်ကျေးရွာနဲ့ ချင်းရွှေဟော်အကြား လုံထန်ရွာအနီးမှာ ကိုးကန့်တပ်က လက်နက်ကြီး၊ လ
Posted: 24 Feb 2015 12:23 AM PST
တခါသုံး ဆေးထိုးအပ်တွေကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်အမီ သုံးစွဲသွားကြဖို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ဆော်သြထားပါတယ်။ ဆေးထိုးအပ်တွေကို တခါမက ပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့အတွက် တနှစ်မှာ လူ ၂ သန်းကျော်ဟာ HIV နဲ့ အသည်းရောင် ရောဂါတွေအပါအ၀င် ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခါသုံး ဆေးထိုးအပ်တွေက ဈေးပိုကြီးပေမယ့် ရောဂါဖြစ်လို့ ကုသရတဲ့ ဆေးကုသစရိတ် ထက်စာရင် ဒီအပ်တွေ သုံးစွဲတာက အကုန်အကျ သက်သာပါတယ်လို့ WHO အဖွြဲ့
Posted: 24 Feb 2015 12:37 AM PST
ပါရီ ၊ ၂၄-၂-၂၀၁၅ ပြင်သစ်နိုင်ငံ သည် ISIS စစ်သွေးကြွ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် များကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် ၄င်းတို့၏ လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘော တစ်စီးကို ယမန်နေ့တွင် ပင်လယ်ကွေ့ ဒေသ၌ စစ်ဆင်ရေး အတွင်း စတင် အသုံးပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြင်သစ် အစိုးရသည် နိုင်ငံအတွင်း လူ ၁၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီး ရက်သတ္တ ခုနစ်ပတ် အကြာတွင် နိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်ေ
Posted: 24 Feb 2015 12:18 AM PST
၀ါရှင်တန် ၊ ISIS စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့သည် လက်ဘနွန် နိုင်ငံတွင်းရှိ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ပြောက်ကျား တပ်ဖွဲ့ကို တန်ပြန် တိုက်ခိုက်ရန် အတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၏ မဟာမိတ် နိုင်ငံများက ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် ခဲ့သည့် စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦးက ဝန်ခံ ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ISIS စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့သည် မိမိတို့ မဟာမိတ် နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေး ထောက်ပံ့ ပေးမှုမှ အစပျိုး
အိုင်စစ် က အသက် ၅နှစခန့်အရွယ်မှစ၍ ကလေးငယ်များကို စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပေးနေသည့် ၀ါဒဖြန့်ဗီဒီယိုတခုကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၉ မိနစ်ကြာအဆိုပါဗီဒီယိုတွင် အာလ်ဖရုခ်စစ်သင်တန်းကျောင်းအမည်ရ သင်တန်းကျောင်း၌ သင်တန်းဆရာ၏ သင်ပြမှုကို နာယူနေသည့် ပြောက်ကျားအိင်္ကျီဝတ်ကလေးငယ်များ အာရေးဘီယားဂီတနောက်ခံတွင် အလံကို မြောက်ကိုင်နေပုံမျာ၊ သင်တန်းဆရာ၏အမိန့်အတိုင်း သတိဆွဲကြပုံ၊ မေးခွန်းများကို တညီတညာတည်း ဖြေကြားကြပုံ၊ သင်တန်းဆရာက
Posted: 24 Feb 2015 12:07 AM PST
ထိုင်းအစိုးရလုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်သမား လက်မှတ် ပန်းရောင်ကဒ်ရှိပြီးသား ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်ဖို့ မှတ်ပုံတင်နဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း အဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင် လောလောဆယ် ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ အစိမ်းရောင် စာအုပ်ကို မြန်မာသံရုံးကနေ ဘန်ကောက်အပါအဝင် နေရာ ၅ ခုမှာ ကြီးကြပ်ရေးရုံးဖွင့်ပြီး ထုတ်ပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေသတင်းေ
Posted: 24 Feb 2015 12:00 AM PST
ဓာတ်ပုံ (ထိုင်းရတ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်က ကော်စမွီကျွန်းမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတဦး အသတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့က သံသယရှိသူ သုံးဦးကို ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ထိုင်းရတ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်မှာဘဲ ကော့စမွီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က သေဆုံးသူ မချောငယ်ငယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေကို စောင့်ကြည့်ကင်မရာ ၆ လုံး အပြင် လူသက်သေတွေပါ မေးမြန်းပြီး သံသယရှိသူတွေကို ဖမ်း
Posted: 23 Feb 2015 11:56 PM PST
ဓာတ်ပုံ (ဘန်ကောက်ပိုစ့်) ဓာတ်ပုံ (မတီချွန်း) ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စူရတ်ဌာနီခရိုင် ကော်ဆမွီကျွန်းမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတဦး အသတ်ခံရတယ်လို့ မြန်မာ အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ပြောပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဘီလူးကျွန်း မုရစ်ကလေးကျေးရွာကနေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ် လာလုပ်တဲ့ အသက် ၂၂ နှစ် မဖူးငယ်ငယ် (ခေါ်) မချောငယ်ငယ်ဟာ ကော်ဆမွီကျွန်းမှာ အသတ်ခံရကြောင်း အစ်မဖြစ်သူက ဖေေ
Posted: 23 Feb 2015 06:40 PM PST
RCSS/SSA ဥက္ကဌ ဒုဗုိုလ်ချူပ်ကြီး ယွက်ဆစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းနေစဉ်။ Photo: Aung Moe Myint/RFA နေပြည်တော်အပါအ၀င် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းက ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေထံ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS/SSA ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌ ဒုဗုိုလ်ချူပ်ကြီး ယွက်ဆစ်ဟာ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်တစ်နေရာမှာ ဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
Posted: 23 Feb 2015 06:19 PM PST
ဓါတ်ပုံ - သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ဒု- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ် အား သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ သျှမ်းဘာသာသတင်းဌာန အယ်ဒီတာ စိုင်းဆိုင်ယ ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းနေစဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၃ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ သျှမ်းပြည်သူလူထုက သျှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ရဲ့ တပ်သားသစ် ကောက်ယူစုဆောင်း မှုခံနေရတယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်။ တပ်သားမပေးနိုင်
Posted: 23 Feb 2015 06:12 PM PST
ကုလသမဂ္ဂ လူမှောင်ခိုကူးမှုဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Maria Grazia Giammarinaro. UN Photo/Paulo Filgueiras မလေးရှားနိုင်ငံက လူမှောင်ခို ကူးခံရ သူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကို မကြာခင်မှာ တင်ပြခွင့် ရကြတော့မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့ လူမှောင်ခိုကူးခံရသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို လေ့လာဖို့ ကုလသမဂ္ဂ
Posted: 23 Feb 2015 03:23 PM PST
ကြက်ခြေနီ ယာဉ်တန်းတွေ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရ လောက်ကိုင် ကနေ လားရှိုး ပြောင်းဖို့ အကျဉ်းသား တွေ ပါတဲ့ ကားတန်း ကို အရင် ကြက်ခြေနီ ယာဉ် တွေ ပစ်ခတ် ခံရတဲ့ လောက်ကိုင် နဲ့ ချင်းရွှေဟော် ကြား လုံထန် အရပ် မှာ မနေ့ ညနေ ၂နာရီ ၁၅ မိနစ် လောက် က လက်နက်ကိုင် လူတစု က ထပ်ပစ် ခံရပါတယ်။ အပစ်ခံ ရတဲ့ အချိန် မှာ ကားဆရာ က အတင်း မောင်းထွက် တာကြောင့် ကားတိမ်းမှောက် ပြီး အကျဉ်းသူ ၄၅ ယောက်၊ ယာဉ်မောင်း စစ်သား နဲ့ အကျဉ်း
သမ္မတ အိုဘားမား ဘတ်ဂျက် ဆွေးနွေး အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ကွန်ဂရက် လွှတ်တော် မှာ ကြီးစိုးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ရီပတ်ဗလီကင် အမတ်တွေ အကြားမှာ ထိပ်တိုက် တိုးနေတဲ့ ကိစ္စ ကတော့ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေး ဌာန အတွက် ဘတ်ဂျက် အသုံးစရိတ် ကို ဒေါ်လာ ဘီလီယံ လေးဆယ် ချပေးဖို့ တောင်းခံတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် မှ ရီပတ်ဗလီကင် အမတ်တွေ ကလည်း သမ္မတ အနေနဲ့ အမေရိကန် မှာ နေထိုင်ခွင့် မရသေးတဲ့ ပြည်ပ နိုင်ငံသား ငါးသန်းခ
Posted: 23 Feb 2015 02:02 PM PST
တောင်ငူ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ အသက် (၄၆)နှစ်အရွယ် အမျိုး သားတစ်ဦး၏ လည်ပင်းထဲသို့ လုံးပတ် ငါးလက်မ၊ အရှည် ငါးပေ ရှိ သစ်ချောင်းကြီး ထုတ်ချင်းပေါက် ဝင်ခဲ့သော်လည်း တောင်ငူခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် များက အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက် ကြီးမြို့နယ် ကျောက်ခဲကြီးကျေးရွာ နေ ဦးမျိုးခိုင်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီခန့်က မီးဖို ချောင်သုံး ထင်းအတွက်
Posted: 23 Feb 2015 02:00 PM PST
၁။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်၍ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေသော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူတို့သုံးစွဲနိုင်ရန် စနစ်တကျကွပ်ကဲလျက်ရှိပါသည်။ ၂။ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်း၌ ဈေးကွက်တင်ရောင်းချနေသည့် အလှ ကုန်ပစ္စည်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ ဈေးများမှဝယ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအလှကုန်ပစ္စည်း ခြောက်မျိုးသည်
ဝှိုက်ကတ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်ပွား ရခိုင် ပြည်နယ်က ဝှိုက်ကတ် ကိုင်သူ တွေကို ဝှိုက် ကတ်တွေ ကို ပြန်အပ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ က စအကြောင်းကြား လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လဝက ထုတ်ပေး ထားတဲ့ ဝှိုက်ကတ် သက်တမ်း မတ်လ ၃၁ ရက် နေ့မှာ ကုန်ဆုံး တော့မှာ ဖြစ်ပြီး မေလ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံး ထား ဝှိုက်ကတ် တွေ ပြန်အပ် ရမယ် လို့ စစ်တွေ မြို့ အောင်မင်္ဂ္လာ ရပ်ကွက် မှာ ခရိုင် လဝက မှူး က တနင်္လ࿿ာ နေ့က အကြောင်းကြား တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ကြေးကြိုးသားရေလေလက်ခုပ်ဟူ၍ ငါးပါးသော တူရိယာတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာသည် မြန်မာ့သမိုင်းနှင့်အတူ ယနေ့တိုင် ယှဉ်တွဲလိုက်ပါလျက်ရှိသည်။ ထိုအထဲမှ ရွှေနန်းတော် သုံး ဆိုင်းတော်ကြီးမှ တောင်တန်းကျေးလက် လယ် ကွင်း စစ်တလင်းအထိ အသုံးပြုကြသည့် သားရေတူရိ ယာမျိုးဖြစ်သော ဗုံ၊ အိုးစည်၊ ဒိုးပတ်၊ ဗြော အစရှိသည့် တူရိယာများကို ရှေးကထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်အတိုင်း လက်မှု ပညာသက်သက်ဖြင့် ယနေ့တိုင်ထုတ်လု
Posted: 23 Feb 2015 01:59 PM PST
တနင်္ဂနွေနေ့က ဟောလိဝုဒ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ (၈၇) ကြိမ်မြောက် အော်စကာ- ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာ Birdman က အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု ဆွတ်ခူးသွားပြီး Birdman ရဲ့ဇာတ်ကားဒါရိုက်တာ Alejandro Gonzalez Inarritu ကလည်း အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကို ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မက္ကဆီကိုပရိသတ်အတွက် ကြိုးစားရကျိုးနပ်တယ်လို့ ဆုပေးပွဲမှာ သူကပြောပါတယ်။ အမေရိကန်ထဲကို ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာကြတဲ့ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားတွေဟာ လူ့ဂုဏ်သိ
သင့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါင်း ၁၀၀
ဘဏ်ငွေထုတ်စက် (ATM) တွေ မြန်မာပြည်မှာ အသုံးများကြ...
မိန်းမသားတို့ ၏ အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရားများ
VIRUS မ၀င်အောင် ကာကွယ်ခြင်း
သင့်မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံတွေက သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအ...
ဟာသ အသုတ်စုံ (၂၇-၂)
"ရုန်း၍ ကန်၍ ရင်ဆိုင်၍"
game over ဖြစ်တဲ့နေ့
ကင်ဆာရောဂါသည် ဘဝမှသည် ကာယဗလမောင် ဘဝသို့
သန်လေးကို၏ ဟာသ အတိုအထွာများ
နောက်လူတွေမတုံးစေဖို့ ။ ။
The Hnyin Thuners ညှင်းသွန်းရွာသားများ
ငါသိဖူးတဲ့ (လူ)(နေ)မှု (ဆက်ဆံရေး)ဟာ ပုံစံတကျ (ဖြစ်...
ပြည်သူကို အဆိပ်ကျွေးနေသော မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည...
ဖေ့စဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၂-၂)
ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အတွင်း တရားထိုင်နေသည့် ဘ...
အချုပ်အချာအာဏာကို အထိပါးမခံ မြန်မာ့မြေကို တလက္မအထိမ...
ကား အတွင်းခန်းထဲမှ အဆိပ်ငွေ့ထွက်ရှိ
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ Generation Wave မှ အိတ်ဖွင့်...
ဟာသ စုစည်းမှု (၂၁-၂)
မောင်ဖေတင်နှင့် ပျက်ပျယ်သွားသော အချစ်စစ် ၊၊
ဟာသ ပေါင်းချုပ် (၂၀-၂)
ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတော်များ ၁၉၆
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၂)
မိဘတွေကို မယုံကြနဲ့ 
ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (၁၂)။ ကိုးကန့် မြွေခြောက်ကိ...
လူနေရာကို အစားထိုးတော့မည့် အမေရိကန်မှ စက်ရုပ်ရဲများ
*** ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့ လ...
" ငါးမူးစေ့ "
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၈-၂)
ဟာသ စုစည်းမှု (၁၅-၂)
နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်စေတဲ့ ရောဂါ
မမ 1 to 10 ကို ပြန်ဖတ်ရန်။
"တို့ဗမာတွေ ဘယ်တုန်းက တော်ခဲ့သလဲ"
နယ်စပ်မြို့တော်မှ စိန်ခေါ်မှုများ (၁၀) (သေမင်းခံတွင်...
Bathing and Blood Pressure သွေးတိုး နဲ့ ရေချိုးခြင်း
ချစ်ဇနီးအတွက် သွေး ၁၄၇ ကြိမ်လှူခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း
သစ်ထူးလွင် သတင်း စုစည်းမှု (၁၆-၂)
"ကျနော်သိသော ခွေးတစ်ကောင် အကြောင်း"
တင်မိုး ပြည်ပြေးဘ၀ ကဗျာလေ့လာချက် နိဒါန်း
သွေးစွန်းခဲ့တဲ့ ချစ်သူများနေ့ (ကျော်ကျော်ငြိမ်းချမ်း)
လောက်ကိုင်<<>>လားရှိုး ကားသမားတစ်ယောက်၏ ရင်တွင်းဖြစ်
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်အနီးက အလုံပိတ်တဲအိမ်များကို ကွင်းဆ...
ဘီပိုး၊ စီပိုးရောဂါအတွက် မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းများ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၄-၂)
ဦးနေ၀င်း၏ တပိုင်းတစ ဆိုးကွက်များ
ဗန္ဓုလပန်းခြံထဲက ခုနစ်နှစ်အရွယ် ပို့စကတ်အရောင်းသမလေး
ကျည်ဆန် ၁၃ တောင့်
နွား နဲ့ သပိတ် + (ဦး) ညိုမြ
ချစ်ကြည်ရေးပျက်ပြားတာက အရေးကြီးသလား....??? လူတွေမျ...
ကိုကန့်ဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေကတော့ ပြင်းထန်နေဆဲပါ။
Academic Edu Talk-16